झुक्याएर एमसीसी पास गरिदैछ: अध्यक्ष ओली (भिडियोसहित) – Karnalisandesh
झुक्याएर एमसीसी पास गरिदैछ: अध्यक्ष ओली (भिडियोसहित)
प्रकाशित मितिः १९ भाद्र २०७८, शनिबार १६:११ September 4, 2021
काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको धारणा माग गरेका छन्।
शनिबार नेकपा एमालेको काठमाडौं महानगरपालिकास्तरीय कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले एमसीसीबारे देउवा र प्रचण्डको धारणा के हो भनी प्रश्न गरे। एमसीसी झुक्याएर पास गर्न खोजिएको भन्दै ओलीले यसबारे गठबन्धनका नेताले केही नभनेको भन्दै आक्रोश पोखे।
‘एमसीसीबारे कोही बोल्दैनन्, के गर्ने हो भन्दैनन्, शेरबहादुर देउवाले भन्नुपर्दैन एमसीसी के गर्ने? प्रचण्डजीले बोल्नुपर्दैन एमसीसी के गर्ने? उहाँहरु चुपचाप छन्’ उनले भने।
‘चीनसँग कुनै सीमा विवाद छँदै छैन, कसलाई खुशी पार्न चीनसँग सीमा विवाद समाधान गर्न समिति बनाउनुप¥यो’ उनले भने ‘मेरो चुनौती छ यो समितिले कुनै ठाउँमा सीमा विवाद देखाओस्।’ सरकारले भारत र चीनसँगको सम्बन्ध तनावग्रस्त बनाउँदै लगेको पनि ओलीले बताए।
त्यस्तै ओलीले पार्टी छाडेर नयाँ पार्टी गठन गरेका माधवकुमार नेपाललाई लाज शरम पचेको मान्छे भनी टिप्पणी गरेका छन्। शनिबार एमालेको काठमाडौं महानगरपालिका स्तरीय समितिले गरेको कार्यक्रममा उनले माधव नेपालले आफूले पूजा गरेको मन्दिरमा अहिले थुकेको टिप्पणी गरे।
‘देशको विकासको अभियान चलाइरहेको सरकार ढालेर दक्षिणपन्थी सरकार बनाउने अनि क्रान्तिका कुरा गर्ने?’ ओलीले भने, ‘मैले यति साह्रो लाज शरम पचेको मान्छे, माधव नेपालजस्तो मान्छे जिन्दगीमा कहिँ पनि देखेको छैन। नेपाल मात्र होइन, दुनियाँको धेरै देशमा पुगेँ, माधव नेपालजस्तो शरम पचेको मान्छे।’
नेकपा एमाले छाडेर हालै एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेपछि ओलीले आक्रोश पोखेका हुन्। माधव नेपालले आफू बसेको खाटमा आफैं बञ्चरो हानेको ओलीले टिप्पणी गरे। ‘अस्तिसम्म जुन खाटमा बसिराखेका थिए, त्यही खाटमा वञ्चरोले हान्या हान्यैं छन्। अस्तिसम्म जुन पिर्का बसेका थिए, त्यही पिर्का भाँचेको भाच्यै छन्। अस्तिसम्म जुन मन्दिरमा पूजा गरेका थिए, त्यो मन्दिरमा थुक्या थुक्यै छन्’ उनले भने।
ओलीले माधव नेपालको पार्टीमा अन्तिममा माधव नेपाल मात्र बाँकी रहने टिप्पणी गरे। ‘माधव नेपाल पार्टी अन्तिममा पनि माधव नेपाल नै हुने हो’ उनले ब्यंग्यात्मक शैलीमा भने, ‘त्यो एकीकृत नै रहन्छ । माधव नेपाल एकीकृत नै रहन्छ।’